Flowline Bag Filter Housing - China Flowline Bag Filter Housing Supplier,Factory –Sffiltech
Home » ngwaahịa » Ngwunye Liquid » Housinglọ nchekwa akpa
Flowline Bag Myọcha Housing
The Side Flow awade kasị na-eri-irè ngwọta otu akpa nyo ụlọ chọrọ. Ọdịdị ya dị iche iche dị iche iche na-ewepu ọdịnala ọdịnala na okpu gburugburu ịgbado ọkụ ma na-enye akara nchekwa, ọ bụghị nke na-agafe agafe maka iguzosi ike n'ezi ihe. The Side Flow dị na Doctop ọhụrụ Splash Guard nchekwa ngwa nhọrọ.
Nhazi nke imeghe ngwa ngwa, kpughee ukpa nke nwere ike mepee mkpuchi ahụ, mmezi dị mma;
Ezigbo mma ịgbado ọkụ, mma na ntụkwasị obi;
High ike igwe anaghị agba nchara bolt na nut, corrosion eguzogide, inogide;
N'èzí nhazi nhazi ájá, mfe dị ọcha, mara mma ma na-emesapụ aka.